Bedelaha lacagta, Sicirrada sarrifka
Lacagta Converter - beddelidda online lacagta kasta oo dunida in heerka maanta. Dashboardkaaga shakhsiyadeed leh sicirka sarrifka iyo jaantuska qiimaha dhammaan lacagaha adduunka. 173 lacag ah xogta waqtiga dhabta ah.
Saacad Day Usbuucii Bisha 3 bilood Sannad 3 sano 10 sano
USD - US dollar EUR - Euro GBP - Sterling pound JPY - Yen CNY - yuan RUB - Ruble Ruush AUD - Australiyaanka dollar AZN - Iya Manaatadii Azerbaijan ALL - Lek Albanian DZD - Diinaar Algerian XCD - Dollar Caribbean East AOA - Kwanza MOP - Pataca Macanese ARS - Peso Argentine AMD - Dram Armenian AWG - Florin Aruban AFN - Afghani Afghan BSD - Dollar Bahamian BDT - Bangladesh taka BBD - Barbados dollar BHD - Bahrain Diinaar BYR - Ruble Belarus BYN - Ruble Belarus BZD - Belize dollar XOF - CFC faran BMD - Bermuda dollar BGN - Laawiyiintii Bulgarian BOB - Boliviano Bolivia BAM - Bosnia iyo Herzegovina sumadda bedeli BWP - Botswana pula BRL - Dhab Brazil BND - Brunei dollar SGD - Singapore dollar BIF - Burundi oo faran BTN - Bhutan ngultrum INR - Qoondayn Hindiya VUV - Vanuatu vatu HUF - Forint Hungarian VEF - Fuerte Boliver Venezuela VND - Vietnamesse dong XAF - CFC faran HTG - Gourde Haitian GYD - Guyana dollar GMD - Dalasi Gambia GHS - Ghana cedi GTQ - Quetzal Guatemala GNF - Faran Guinea GIP - Gibraltar pound HKD - Hong Kong dollar HNL - Honduran lempira GEL - Lari Joorijiyaan DKK - Taaj Danish DJF - Faran Jabuuti DOP - Dominican peso EGP - Pound Masaarida ZMW - Kwacha Zambia MAD - Dirham Morocco ZWD - Zimbabwean dollar ILS - Sheqelka cusub Israel IDR - Rupiah Indonesian JOD - Urdun Diinaar IQD - Diinaar Ciraaq IRR - Riyaalka Iran ISK - Iceland krone YER - Riyaalka Yemen CVE - Cape Verde escudo KZT - Kazakhstani tenge KYD - Cayman Islands dollar KHR - Riel Kamboodiya CAD - Dollar Canadian QAR - Riyal Qatar KES - Kenya oo shilin COP - Peso Colombian KMF - Faran Comoran CDF - Faran Congo KPW - Won Waqooyiga Kuuriya KRW - Won South Korean RSD - Diinaar Serbian CRC - Costa Rica colon CUP - Peso Cuba KWD - Diinaar Kuwaiti NZD - New Zealand dollar KGS - Som Kyrgyzstani LAK - Lao Kip LVL - Latvia laat LSL - Loti ZAR - Rand LRD - Liberia dollar LBP - Pound Lubnaan LYD - Diinaar Liibiya LTL - Litas Lithuanian CHF - Faran Swiss MUR - Mauritius qoondayn MRO - Ouguiya Mauritanian MGA - Ariary Malagasy MKD - Denar Makedoniya MWK - Malawi kwacha MYR - Malaysin ringgit MVR - Rufiyaa Maldivian MXN - Peso Mexico MZN - Metical Mozambique MDL - Leu Moldova MNT - Tugrik Mongoliyaan MMK - Kyat Burma NAD - Dollar Namibia NPR - Qoondayn Nepal NGN - Naire Nigeria ANG - Gulden Antilliaanse NIO - Cordoba Nicaraguan XPF - Faran Faransiis Pacific NOK - Krone Norwegian AED - UAE dirham OMR - Riyaalka Cumaan SHP - Saint Helena pound PKR - Pakistan qoondayn PAB - Balboa Panama PGK - kina PYG - Guraani PEN - Sol Nuevo Peruvian PLN - Zloty Polish RWF - Faran Rwanda RON - Leu Romania XDR - JDS (Special xuquuqda barbaro) SVC - Colon Salvadoran WST - tala STD - Sao Tome iyo Principe dobra SAR - Riyal Saudi SZL - lilangeni TRY - Boqalaal New Turkish SCR - Seychelles qoondayn SYP - Pound Suuriya SKK - Slovak koruna SBD - Sulaymaan Islands dollar SOS - Oo shilin Soomaali SDG - Pound Sudan SRD - Surinam dollar SLL - leone TJS - Somoni Tajikistani THB - Baht Thai TWD - Taiwan dollar cusub TZS - Shilinka Tansaaniya TOP - pa`anga TTD - Trinidad and Tobago dollar TND - Diinaar Tunisia TMM - Turkmenistan Manaatadii TMT - Turkmenistan Manaatadii cusub UGX - Uganda oo shilin UZS - Uzbekistan wadarta UAH - hryvnia UYU - Peso Uruguay FJD - Fiji dollar PHP - Filibiin peso FKP - Falkland Islands pound HRK - KUNA Croatian CZK - Koruna Czech CLP - Peso Chile SEK - Kroon Swedish LKR - Sri Lanka qoondayn ERN - nakfa ETB - Birr Itoobiya JMD - Dollar Jamaica SSP - Pound South Sudan BTC - Seeraar CLF - Chile Unidad de Fomento EEK - Kroon Istooniyaan GGP - Guernsey pound IMP - Manx pound JEP - Jersey pound MTL - Boqalaal Malta XAG - Troy ounce oo lacag ah XAU - Troy ounce oo dahab ah / dahab electronic) ZMK - Kwacha Zambia ZWL - Zimbabwe dollar ATS - Shilin Austria AON - Kwanza cusub Angola BEF - Faran Belgian GRD - Lumiso Greek IEP - Pound Irish ESP - Peseta Spanish ITL - Lire Talyaani CYP - Cyprus pound DEM - Deutsche sumadda NLG - Netherlands guilder PTE - Escudo Portuguese SIT - Tolar Slovenia SRG - Surinam guilder FIM - Sumadda balan kalluun FRF - France bashaash ECU - ECU YUM - Diinaar cusub Yugoslaviyadii
USD = 1.40 SOS
US dollar qiimaha sicirka
EUR = 1.46 SOS
Euro qiimaha sicirka
GBP = 1.69 SOS
Sterling pound qiimaha sicirka
JPY = 0.010327 SOS
Yen qiimaha sicirka
CNY = 0.21 SOS
Yuan qiimaha sicirka
Converter Lacagta kormeera heerka sarifka lacagaha qalaad oo maalin Central Banks for 173 lacagaha.
Heerka sarrifka lacagta Forex Live at 02 July 2022
Heerarka lacagta sarrifka ah ee taariikhiga ah, astaamaha taariikheed.
Beddelaada Lacagta ayaa soo bandhigaya heerka sarrifka lacagaha ee mid kasta oo ka mid ah lacagaha la xushay maanta. Sicirka sarrifka waxaa dejiya bangiyada qaranka waxayna fuliyaan aasaaska go'aaminta sicirka sarrifka goobaha lacagaha laga beddelo iyo bangiyada ganacsiga. Waxaad raaci kartaa sicirka sarrifka ee bangiga qaranka si aad u hesho sicirka sarrifka ugu wanaagsan ee iibsashada iyo iibinta lacagaha.
Beddelka lacagta ee websaydhkeenna sidoo kale wuxuu muujinayaa heerka sarrifka ee sarrifka Forex. Qiimaha Forex cusbooneysiinta 30 sekan kasta. Ka eeg sicirka sarrifka tooska ah toos iyo toosba waqtiga dhabta ah.
Heerka lacagta ee sarrifka Forex ayaa la dejiyaa seken kasta, marka la barbardhigo sicirka lacagta qaranka ee uu dejiyay bangiga qaranka hal mar maalintii.
Waxaan si joogto ah ula soconaa sicirada 173 lacagaha, labadaba isweydaarsiga ganacsiga iyo heerarka rasmiga ah ee dowladda. Waxaad ka daawan kartaa si bilaash ah sicirka sarrifka lacagaha mid kasta si la mid ah.
Waad ula socon kartaa heerka sarrifka ee hal lacag marka loo barbar dhigo mid kale adoo adeegsanaya golahan shaqsiyeed. Heerka sarrifka waxaa lagu muujiyey qaab garaafyo iyo lambarro ah, isbeddelada sicirka ayaa lagu soo bandhigayaa qeyb gaar ah boqolley ahaan. Kordhinta iyo hoos udhaca sicirka lacagta ayaa lagu muujiyey midabbo kala duwan.
Qiimaha sarrifka lacagaha ugufiican
Xaddiga sarrifka ugu wanaagsan waxaa lagu raad-raaci karaa garaafyada isbadalada deg-degga ah ee heerka sarrifka ee dariiqa goobta ama bogagga qiimaha sarrifka internetka ee sarrifka Forex. Hal dariiqo oo lagula socdo qiimaha ugu wanaagsan waa in si joogto ah loo fiirsado isbeddelka lacagta la xushay, iyo markii shaxda sicirka lacagta ay muujineyso qiimaha ugu yar, waqtigaani waa waqtiga ugu wanaagsan ee wax la iibsado, iyo goorta ugu badan ee iibinta lacagta.
Oo shilin Soomaali sicirka sarrifka ee maanta
Oo shilin Soomaali sicirka sarrifka maanta waa macluumaadka aasaasiga ah ee dadka badankood adeegsadaan. Waxaad ka ogaan kartaa heerka rasmiga ah ee Oo shilin Soomaali sicirka sarrifka maanta ee lacag kasta oo adduunka ah bartayada internetka.
Waxaan la soconaa sicirka sarrifka lacagaha ee maalin kasta waxaanan ognahay sicirka ma ahan oo keliya maanta, laakiin maalin walba tan iyo 1992.
Heerka Oo shilin Soomaali ayaa loo dejiyay natiijada ganacsiga intii lagu jiray shalay. Adigoo baaraya isbedelka Oo shilin Soomaali heerka sarrifka ee shalay, waxaad saadaalin kartaa heerka sarrifka rasmiga ah ee maanta.
Oo shilin Soomaali sicirka sarrifka berri
Oo shilin Soomaali sicirka sarrifka berri waxaa sameeyay bangiga qaranka oo ku saleysan Oo shilin Soomaali ka ganacsiga Forex iyo suuqyada kale ee sarrifka maanta. Berrito Oo shilin Soomaali waa aasaaska isweydaarsiga Oo shilin Soomaali bangiga ku yaal .
Markaa, iyadoo la kormeerayo isbeddelada ku jira Oo shilin Soomaali inta lagu jiro maalinta isdhaafsiga websaydhka, waxaad awoodi doontaa inaad saadaasho ka bixiso Oo shilin Soomaali qaddarka berri iyo Oo shilin Soomaali isweydaarsiga qiimaha ee bangiyada berri .
Samee Oo shilin Soomaali gudiga dabagalka bogga bogga internetka ee lacagta badala. Eeg Oo shilin Soomaali sicirka sarifka khadka tooska ah, waxaad had iyo jeer si sax ah u qiyaaseysaa Oo shilin Soomaali sicirka sarrifka ee berri.
Heerka sarrifka ee Oo shilin Soomaali ka dhanka ah dollar maanta
Oo shilin Soomaali oo u sarrifka doollar maanta waa midka ugu weyn Qiimaha sarrifka ee suuqa adduunka Oo shilin Soomaali Waa sicirka sarrifka Oo shilin Soomaali oo ka soo horjeedda doollar go'aaminaya heerka sarrifka Oo shilin Soomaali ka dhanka ah lacagaha kale.
Waxaad arki kartaa sarkaalka Oo shilin Soomaali oo u sarrifka doollar oo ay dejisay bangiga dawladda maanta iyo Oo shilin Soomaali oo ku sarrifka doollarka sarrifka Forex onlaynka .
Heerka sarrifka ee Oo shilin Soomaali ee ka dhanka ah euro maanta
Sicirka sarrifka Oo shilin Soomaali ka dhanka ah lacagta euro ee maanta ayaa lagu soo bandhigay websaydhka moneyratestoday.com laba nooc:
sarkaalka sicirka sarrifka ee Oo shilin Soomaali ilaa euro oo ay dejisay bangiga dawladda maanta iyo
sicirka sarrifka ee Oo shilin Soomaali in euro laga dhigo isdhaafsiga Forex onlayn
Oo shilin Soomaali sarrifka lacagaha ee euro sida mid ka mid ah lacagaha ugu waaweyn adduunka ayaa go'aaminaya Oo shilin Soomaali sicirka sarrifka lacagaha kale ee adduunka. Raadso Oo shilin Soomaali sicirka sarrifka ee maanta dashboard-ka websaydhka ee websaydhka.
Beddelashada Lacagta Oo shilin Soomaali khadka tooska ah
Beddelashada Lacagta Oo shilin Soomaali khadka tooska ah ee websaydhka ayaa kuu oggolaanaya inaad ogaato Oo shilin Soomaali sicirka sarrifka lacagaha adduunka oo dhan. Waxaan maalin walba la soconaa Oo shilin Soomaali ilaa 172 lacagaha kale ee adduunka.
Si aad ugu beddelatid Oo shilin Soomaali si faaido leh oo loo beddelo lacag kale oo bangiyo ah, raac Oo shilin Soomaali sarrifka adoo isticmaalaya aaladaha internetka.
Doolarka lacagta dollarka ah ee khadka tooska ah laga isticmaalo
Beddelashada Lacagta Doolarka Dollarku waa sarrifka dollarka ee adeegga oo lagu beddelo dhammaan lacagaha adduunka oo ay ku jiraan Oo shilin Soomaali. Waad la socon kartaa beddelka dollarka:
ee kujira astaamaha widget-ka shaqsiyeedka ah ee laga helayo moneyratestoday.com
ee gudaha sicirka sarrifka doolarka rasmiga ah adeeg
bogga bogga heerka sarrifka dollar ee sarrifka 'Forex' qadka internetka
Beddelaadda doolarku wuxuu ku shaqeeyaa mid kasta oo ka mid ah 172 lacagaha adduunka ah. Waxaan soo bandhignay heerka sarrifka dollar ee maanta iyo taariikhda isu beddelashada doollarka 30ka sano ee la soo dhaafay.
Ku beddelashada lacagta Euro khadka tooska ah
Beddelashada Lacagta Euro khadka tooska ah - Euro adeegga adeegga Euro si lacagaha adduunka. Beddelka lacagta Euro wuxuu ka mid yahay Oo shilin Soomaali oo loogu beddelayo euro.
Heerka sarrifka Euro ee websaydhka Lacagta Lacagta ah waxaa laga arki karaa khadka tooska ah xisaabiyaha:
ee kujira astaamaha gaarka loo leeyahay ee laga helo moneyratestoday.com
bogga rasmiga ah Heerka beddelaadda Euro
ee adeegga khadka tooska ah, heerka sarrifka lacagta euro ee sarrifka 'forex' khadka tooska ah
Beddelaha euro wuxuu soo bandhigayaa heerka sarrifka wixii ka mid ah 172 lacagaha adduunka ah. Waxaan leenahay heerka isu beddelashada euro ee maanta iyo taariikhda isu beddelashada lacagta euro-da ee 30-kii sano ee la soo dhaafay.
Doolar illaa Oo shilin Soomaali lacag u beddelashada khadka tooska ah
Doolar illaa Oo shilin Soomaali beddelaad lacageed khadka tooska ah - Oo shilin Soomaali adeegga heerka sarrifka ee sarrifka Forex.
Waxaad arki kartaa Oo shilin Soomaali sicirka isdhaafsiga oo bilaash ah oo leh isugeyn isugeyn ah 30-kii ilbiriqsi kasta.
Oo shilin Soomaali ee sarrifka doollarka waa la arki karaa labadaba daqiiqada ugu dambeysa, iyo saacad, iyo maalin.
Taariikhda Oo shilin Soomaali illaa sicirka sarrifka doollarka ayaa lagu keydiyay keydkayaga ilaa iyo 1992. Eeg heerka Oo shilin Soomaali / sicirka sarrifka maalinlaha .
Euro ilaa Oo shilin Soomaali lacag u beddelashada khadka tooska ah
Euro ilaa Oo shilin Soomaali Lacag-beddelasho khadka tooska ah - bogga of Oo shilin Soomaali sarrifka lacagaha ee sarrifka Forex.
Oo shilin Soomaali ee ka dhanka ah euro ayaa la cusbooneysiiyaa 2 jeer 1 daqiiqo gudaheed.
Oo shilin Soomaali heerka sarrifka euro waxaa la arki karaa labadaba daqiiqada ugu dambeysa, iyo saacad, iyo maalin.
Taariikhda Oo shilin Soomaali in euro iyo euro loo isticmaalo Oo shilin Soomaali sicirka sarrifka ayaa goobta joogay ilaa 1992. Sicirka sarrifku waa mid furan maalin walba.
Beddelka lacagta Bitcoin khadka tooska ah, heerka bitcoin maanta
Beddelaada lacagta Bitcoin khadka tooska ah looma muujiyo websaydhkeena. Moneyratestoday.com kaliya waxay la socotaa lacagaha rasmiga ah.
Laakiin heerka sarrifka Bitcoin ee maanta waa mid aad u muhiim u ah macluumaadka aagga crypto.
Halkan waxaad ka arki kartaa sicirka sarrifka ee maanta .
Ku beddelashada Cryptocurrency onlayn, qaddarka cryptocurrency
Beddelka cryptocurrency khadka tooska ah sidoo kale waxaa lagu daawan karaa xiriirka hoose.
Qiimaha sarrifka ee ka badan 2000 crypto waxaa lagu raad raacaa barta internetka ee wehelkayaga.
Hadda crypto ayaa helaya caanka ah waxaana laga yaabaa inuu qayb ahaan noqdo badalka dollar, euro iyo lacagaha kale ee qaran.